ကဗာပတ်ရှုပ်သောတရုတ် – ဘူရှိဒိုစိတ်ဓါတ်ဂျပန် ဒုတိယစစ်ပွဲ (၁၉၃ရ – ၁၉၄၅) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » ကဗာပတ်ရှုပ်သောတရုတ် – ဘူရှိဒိုစိတ်ဓါတ်ဂျပန် ဒုတိယစစ်ပွဲ (၁၉၃ရ – ၁၉၄၅)
ကဗာပတ်ရှုပ်သောတရုတ် – ဘူရှိဒိုစိတ်ဓါတ်ဂျပန် ဒုတိယစစ်ပွဲ (၁၉၃ရ – ၁၉၄၅)
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on Oct 12, 2017 in Best Web Awards, News |3comments
ဈေးပေါသော အလုပ်သမားခနှင့် သယံဇာတရင်းမြစ် ကြွယ်ဝမှုတို့အား မက်မောရွေ့ တရုတ်ပြည်ကို ၁၉၃ရ တွင် ဂျပန်ဝင်ရောက် က ျူးကျော်သည်။ အင်အားပြင်းထန်သော ထိုးစစ်နှင့် ကျူးကောျ်သိမ်းပိုက်ရန် ၁၉၃ရတွင် ပေကျင်းအနီး မာကိုပိုလို တံတားအနီးတွင် ဖြစ်ပွားသည့် နှစ်ဖက် အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှုအား ဂျပန်တို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် ဖန်တီးရွေ့ ပဋိပခ စတင်သည်။ ထိုနှစ်နှောင်းပိုင်း ဒီဇင်ဘာ ၁၃တွင် အမျိုးသားရေးဝါဒီတို့၏ မြို့တော် နန်ကျင်းအား ဂျပန်တို့သိမ်းပိုက်ပြီး စစ်သုံ့ပန်း နှင့် အရပ်သားများအား ကွက်မျက်သတ်ဖြတ်၊ အမျိုးသမီး ထောင်ချီ မုဒိမ်းကျင့်ခံရကာ မြို့အား မီးရှို့ဖျက်ဆီး လုယက်မှုများဖြင့် ရက်စက်မှုအပေါင်း သရဖူဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ။။။။
တရုတ်မှာ ဂျပန်တို့ ပုံစံချထားသော အရှေ့အာရှ စီးပွားရေး မ ျှဝေခံစားရေးဇုန်အတွင်း ကျရောက်နေခဲ့သည်။ ရည်ရွယ်ချက် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဂျပန်မှ ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ရေး မူဝါဒကို ဟိုးအရင်ထဲက စတင်နေခဲ့သည်။ ၁၉၃၁ စက်တင်ဘာတွင် ဂွမ်ဒေါင် တပ်တော်မှ မန်ချူရီးယား ထိုးစစ်အား ဆင်နွှဲရွေ့ တရုတ်ပြည် အရှေ့မြောက်ခြမ်းကို စတင်သိမ်းပိုက်ပြီး နောက်တနှစ်တွင် ကွင်တရုတ်မင်းဆက် နောက်ဆုံးဘုရင် ပုရီကို ရင်ခွင်ပိုက် အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်အဖြစ် တင်မြောက်ကာ နိုင်ငံတခု တည်ထောင်သည်။ တကဲ့ အာဏာမှာ ဂွမ်ဒေါင်စစ်တပ်မှ ချုပ်ကိုင်ထားသော အမျိုးသား ကာကွယ်ရေး အစိုးရလက်ဝယ် ရှိနေပြီး Manzhouguo (Manchukuo) မှာ အာရှတိုက်အတွင်းပိုင်းထဲ ကျူးကျော်ရန် ဂျပန်၏ စစ်ရေး၊ စီးပွားရေး အခြေစိုက်စခန်း ဖြစ်လာသည်။ ။။။။
စစ်ပွဲစတင်ချိန်တွင် တရုတ်ပြည် အများစုကို အမျိုးသားရေးပါတီ ကူမင်တန်မှ ထိန်းချုပ်ထားကာ ကနဦးတွင် အရှေ့ဖက်ပင်လယ် မြို့ကြီးများတွင် အင်အားတောင့်တင်းကာ နောက်ပိုင်းတွင် ကုန်းတွင်းပိုင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီး စစ်ပွဲတွင်းမြို့တော် ချောင်ကွင်းကို တည်သည်။ ကူမြူနစ်တို့မှာ ယင်န်အန်မြို့အပါအဝင် အနောက်မြောက်ဖက်တကြော လွတ်မြောက်ရေးဒေသဟု သတ်မှတ်သည့် ကျေးလက်များတွင် အင်အားတည်ဆောက်သည်။ အဆိုပါ စစ်ရေးပဋိပက်ခကို ဒုတိယ တရုတ်-ဂျပန် စစ်ပွဲဟု လူသိများပြီး (ပထမ တရုတ်-ဂျပန် စစ်ပွဲမှာ ၁၈၉၄ – ၉၅ တွင်ဖြစ်ပွားသည်) နယ်ချဲ့ဂျပန် ခုခံစစ်ပွဲဟုလဲ ကင်ပွန်းတပ်သည်။ ပစိဖိတ်ဒေသတွင် ဖြစ်ပွားသော ဒုတိယကဗာစစ်နှင့်အတူ စတင်ခဲ့ပြီး ၁၉၄၅ခုနှစ် ဂျပန်တို့ လက်နက်ချတော့မှသာ ပြီးဆုံးသည်။ စစ်ပွဲကြောင့် လူ သန်း၂ဝ အသက်ဆုံးရှုံးပြီး အတိအကျ အရေအတွက်မှာ အကြီးအကျယ် အငြင်းပွားလျက်ပင် ရှိသေးသည်။ ပြင်းထန် ရက်စက်သော စစ်ပွဲတွင် အရပ်သားများကို ပစ်မှတ်ထား ဗုံးကြဲခြင်း၊ သတ်ဖြတ်၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်၊ သက်ရှိလူသားများကို တိရိစာန်သဖွယ် ဓါတ်ခွဲခန်းထဲ စမ်းသပ်၊ မုဒိမ်းကျင့်ခြင်းအပြင် ဓါဓုဗေဒ နှင့် ဇီဝပိုးမွှားလက်နက်နှင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများ ပါဝင်သည်။ ။။။။
ဂျပန်၊ တရုတ် နှစ်ဖက်စလုံးမှ တရုတ်ပြည်သူများကို ပိုစတာ ဝါဒဖြန့်ချီရေးသုံးရွေ့ ဩဇာလွှမ်းရေး ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ဂျပန်တို့က သူတို့ စစ်ရေးကျူးကြော်မှုကို တရားဝင်ရန် ခုခံတိုက်ခံမှုများ အချည်းနှီးဖြစ်ကြောင်း၊ အမျိုးသားရေးဝါဒီများ ကူမြူနစ်များနှင့် တရုတ်ပြည်သူများ ပူးပေါင်းခြင်းမရှိစေရန် အားထုတ်သည်။ ကူမြူနစ် နှင့် အမျိုသားရေး ကူမင်တန်တို့က ဘုံရန်သူ ဂျပန်ကို ခုခံရန် လူထုအား နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုများ ပြုသည်။ ကူမင်တန်နှင့် ကူမြူနစ်တို့ အသုံးပြုခဲ့သော ဝါဒဖြန့်ချီ ပိုစတာများမှာ ယခုအခါ အလွန်အမင်း ရှားပါးနေပြီး ကော်ပီတခုတလေသာ ကျန်ရစ်သည်။ ကူမင်တန် ပိုစတာများတွင် ဒဏ်ရာရ စစ်သားများကို ဖေါ်ပြသည်။ သူတို့၏ ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံမှုများကို ချီးမွှမ်းကာ ပြန်လည်သက်သာ ကောင်းမွန်ပြီး ရှေ့တန်းပြန်ထွက်ရန် အားပေးထားသည်။ အချို့မှာ ဂျပန် ပိုစတာများဖြစ်သည်။ ကူမြူနစ်များကို တိုက်ခိုက်ထားပြီး ဂျပန်စစ်တပ် အောင်မြင်မှုများကို ဂုဏ်ပြုကာ နောက်တန်းမှ အားပေး ထောက်ခံမှုများဖြင့် ဝါဒဖြန့်သည်။ ။။။။။
ရည်ညွှန်း ။ ။။။ https://chineseposters.net/themes/second-sino-japanese-war.php
။။။။။ တရုတ်ဖက် ထိခိုက်သေကြေမှုစာရင်း ။။။။။
– စစ်သား ၃သန်း ၂သိန်း ၂သောင်း။ ။
– အရပ်သား ၉သန်း ၁သိန်း ၃သောင်း (နှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှု ကြားညှပ်) ။ ။
– စစ်သားမဟုတ်သူ ၈.၄သန်း ဒဏ်ရာရ။ ။
– စုစုပေါင်း ဒဏ်ရာရသူ ၃၅သန်း ရှိ၊ (အနောက်တိုင်း သမိုင်းပညာရှင်များက အနဲဆုံးတော့ သန်း၂ဝ ရှိမည် ခန့်မှန်း)။ ။
– ၉၅ စစ်ပြေး ဒုတ်ခသည်ဖြစ်။
။။။။။ ဂျပန်ဖက် ထိခိုက်သေကြေမှုစာရင်း ။။။။။
– စစ်သား ၁သန်း ၁သိန်း မှ ၁သန်း ၉သိန်း ထိခိုက်၊ သေဆုံး၊ ပျောက်ဆုံး။ ။
– ဂျပန်ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အဆိုအရ ၂သိန်းပဲရှိ သို့သော်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ အရှည်ကာလကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် အရေအတွက် အလွန်အမင်း လျှော့ပြထားပုံရ။ ။
– ဂျပန်စစ်သား ၁သန်း ရသိန်း ရသောင်းအား သတ်ဖြတ်ခဲ့လို့ တရုပ်ဖက်မှပြော။ ။
တရုတ်ကူမြူနစ်ကေဒါ ကြေးမုံနီဂျီး၏ခြစ်သူ ဗကပကြောင်ကြီး
ရည်ညွှန်း။ ။ http://www.enemyinmirror.com/china/second-sino-japanese-war-casualties-1937-1945/
Joining the army to protect the nation is the people’s duty
Joining the army to protect the nation is the people’s duty, ca. 1937
China had to become part ofaJapanese designed ‘East Asian Economic Co-Prosperity Sphere’. To that end, Japan already much earlier had startedapolicy of encroachment. In September 1931, the Guandong Army had launched the Manchurian Incident and began the occupation of Northeast China; the following year it installed Puyi, the last and former emperor of the Qing dynasty, as chief executive (he was enthroned in 1934), andastate was formed; all real power in national defense and government were held by the Guandong Army, and Manzhouguo (Manchukuo) thus became the military and economic base for the Japanese invasion of the Asian mainland.
At the time the war started, the bulk of China was controlled by the Nationalist Party (Guomindang, 国民党, old transcription: Kuomintang), which intially was especially strong in the urban areas along the Eastern seaboard but moved inland and established its wartime capital in Chongqing. The Communists had entrenched themselves in “liberated areas” in the countryside, including Yan’an in the Northwest. The military conflict became known as the “Second Sino-Japanese War” (the First Sino-Japanese War was from 1894 to 1895), or the “War of Resistance Against Japan” (抗日战争). It marked the beginning of the Second World War in the Pacific, ending only with the surrender of Japan in 1945. The war cost at least 20 millions of lives, although the exact number of casualties is still heavily debated. It wasacruel war, including targeted bombing of civilians, murder, torture, human experiments and rape, and the use of chemical and bacteriological weapons.
Quiteafew of the Nationalist posters feature wounded soldiers. They are praised for their sacrifice, encouraged to get well soon and given time to heal – in order to go back to the front.
Casualties in the Second Sino-Japanese War – 1937-1945
January 2, 2013 by MarkS
The number of casualties in the Second Sino-Japanese War were shocking:
3.22 million soldiers
9.13 million civilians killed in crossfire
8.4 million non-military casualties.
Chinese sources claim ~35 million total casualties (most Western historians estimate at least 20 million).
Estimated 1.1-1.9 million military casualties, killed, wounded & missing
Japan defense ministry claimed only about 200,000, but this is believed to be extremely low considering the length of the conflict
Chinese forces claimed 1.77 million Japanese soldiers killed
အဲ့ဒီ လင့်ခ်က ဖြူဖြူကျော်သိန်း ဆိုထားတဲ့ စစ်ဆိုတဲ့ သီချင်း။
”တိုးတက်နေတဲ့ တိုင်းပြည်များကို ကျည်ဆံနဲ့ တည်ဆောက်မရ”ဆိုတဲ့ စာသားပါတယ်။
ကျနော့် အမြင်မှာတော့ ခလုပ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကို ဖျက်ပစ်လို့ရတဲ့ လက်နက်ကြီးတွေ ပိုင်ထားတာက
ဆိုတော့ ဒီ သီချင်းစာသားကိုလည်း သိပ် လက်မခံချင်တော့သလိုလို။
ဒီ စစ်ပွဲတွေအကြောင်း ဖတ်အပြီး စစ်နဲ့ ဆိုင်တာတွေ လျှောက်တွေးပြီး ဒါလေး ပြောမိသွားတာပါ